Soo dejisan AutoCAD 2016 – Vessoft
Soo dejisan AutoCAD
AutoCAD – software awood leh u design 2D iyo 3D ka Autodesk. The qaababka ugu muhiimsan ee software-ka waxaa ka mid ah: muuqaalaynta daydo of arrays israacinayo 3D tayo sare leh, shaqo adeegyada wadci, , soo saarida meelaha qalooca iwm AutoCAD ka kooban buuxda oo qalab loogu talagalay adag-gobolka, dusha iyo habka 3D polygonal. Software waxaa ka mid ah taageerada ay u daruuro dhibic, kaas oo u ogolaanaya u shaqeeya iyada oo natiijada iskaanka 3D iyo sidoo kale kuu oggolaanayaa in aad daabacdo natiijada Tusaale on 3D-printer. AutoCAD taageertaa interfaces API badan u qaabeynta iyo qalabaynta.
Tiro balaadhan oo ah suurtagalnimada Tusaale
Management of daabacaadda 3D
Taageerada Daruur dhibic
Muuqaalaynta qaabka PDF
Comments on AutoCAD:
AutoCAD Software la xiriira:
English, Українська, Français, Español... MKV Player 2.1.17
English, Français, Español, Deutsch... RoboForm 7.9.22.2
العربية, English, Українська, Français... Sony PC Companion 2.10.281
Phone Si sahlan ay u isticmaalaan Tababaraha file ka mid ah qalabka Sony. Software wuxuu taageeraa update ee codsiyada iyo nidaamka qalliinka ee qalabka ka.
العربية, English, Français, Español... Cookie Monster 3.47
Phone software The si ay u gudbiyaan files warbaahinta u dhexeeya oo aad computer iyo qalab macruufka. software waxay leedahay set oo ah qalab si ay u maareeyaan music iyo video files.